Mwakpo phishing ahọrọla ndị cryptanalyst - CoinWorldMap
Ndị aghụghọ phishing abụghị ihe ọhụrụ na oghere dijitalụ na ndị omekome na-ejiwanye ha eme ihe na oghere crypto. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ akụkọ na Fraịde gosiri na ndị scammers na-ezubere ndị ọrụ nke nyiwe nyocha data cryptocurrency CoinGecko na Etherscan.
Na Fraịde, CoinGecko na Etherscan dọrọ ndị ọrụ aka ná ntị banyere mkparị phishing nwere ike ime na nyiwe ha. N'ihi ya, akụkụ abụọ a adọọla ndị ọrụ aka na ntị ka ha ghara ijikọ obere akpa Metamask ha na mpio mmapụta ọ bụla na webụsaịtị ha. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na nseta ihuenyo bipụtara gosiri na ndị scammers na-agbalị ịghọgbu ndị ọrụ na-enye onyinye adịgboroja. Nft sitere na Bored Ape Yacht Club (BAYC).
Etherscan tweeted: "Anyị enwetala akụkọ banyere mmapụta phishing site na ntinye nke ndị ọzọ ma na-eme nyocha ugbu a. Biko kpachara anya ka ị ghara ịkwado azụmahịa ọ bụla pụtara na webụsaịtị… nwa oge, anyị emeela ihe ozugbo iji gbanyụọ njikọ ndị ọzọ kwuru.”
Dị ka onye ọrụ Twitter Noedel19 si kwuo na mbụ ma e mesịa Etherscan na Coinzilla kwadoro, isi mmalite nke irigbu a nwere ike ịchọta azụ na Coinzilla Ads, mgbasa ozi crypto jikọtara na ọtụtụ saịtị crypto. Mgbe o kwusịrị nrigbu ahụ, Coinzilla kelere ndị ọrụ maka nzaghachi ha wee mesie ha obi ike na ndị otu ha lekọtara nkwekọrịta ahụ.
Coinzilla kọrọ na mmapụta ahụ bụ n'ihi otu mgbasa ozi nwere koodu ọjọọ nke na-agafeghị nyocha nchekwa. Kedu ihe ọzọ, netwọk mgbasa ozi ahụ kwuru na mkpọsa ahụ erughị otu awa tupu otu ha enweta ọnọdụ ahụ.
“Otu mkpọsa nke nwere mpempe koodu ọjọọ nwere ike ịgafe akwụkwọ nyocha anyị na-akpaghị aka. O were ihe na-erughị otu awa tupu ndị otu anyị kwụsị ya ma machibido akaụntụ ahụ, "Coinzilla dere na blọọgụ ya.
Dị ka akụkụ nke nzaghachi ha na mbuso agha ahụ, netwọkụ ahụ kwuru na ha ga-akwalite nchekwa ha n'ihi mwakpo a. Coinzilla ekwela nkwa na na mgbakwunye na nkwalite teknụzụ, ọ "ga-eji aka nyochaa ma megharịa ihe okike niile nke ndị ahịa anyị na-eji" iji hụ na ndị wayo adịghị etinye koodu ọjọọ n'ime edemede ndị ọzọ.
Na mgbakwunye, netwọk mgbasa ozi na-ekwu na ọ ga-arụ ọrụ na saịtị niile metụtara nrigbu ahụ iji kwado onye ọrụ ọ bụla nwere ike tufuo akụ dijitalụ n'ihi nrigbu ahụ, ma kpebisie ike ịchọta ndị nwere ọrụ. Aghụghọ phishing kacha ọhụrụ na-anọchi anya mbọ ọhụrụ nke ndị scammers na-eme iji nweta nnukwu mkparị na gburugburu BAYC gburugburu. Cheta aghụghọ aghụghọ phishing BAYC aghọwo ndị ewu ewu kemgbe mmalite nke ApeCoin.
LUNA na-ewepụ 1000% ekele maka atụmatụ